सैनिक र बन्दुक - भियतनाम अध्ययन को पवित्र भूमि
849 दृश्य प्रो एसोसिएट HUG NGUYEN MANH
I। केही कागजातहरूका अनुसार भियतनाममा, गायिएको हो माई [होआ माई] (माचलोक) बन्दुकको लागि लोकप्रिय नाम थियो गाई डियु thuong [sđng điểu thương] (मस्केट) कम कम प्रयोग गरिएको थियो र 16th बाट 19th शताब्दी सम्म प्रयोग भयो। सामन्ती राजवंशहरू (Le, Mac, Trinh, Nguyen [Lê, Mạc, Trịnh, Nguyễn]) सेनाका लागि पूर्ण रूपमा सुसज्जित म्याचलाक्स। ऐतिहासिक र साहित्यिक अभिलेखहरूले त्यस बेलाका लडाईहरू यसप्रकार वर्णन गरे: “झर्ने ताराहरू झैं उडान बुलेटहरू"। लोक गीतहरूले पनि सैनिकहरूको छविलाई रोमान्टिकको रूपमा रेकर्ड गर्‍यो:
कम्मर वरिपरि पहेलो बेल्ट
चिह्नित टोपी लगाएर, राइफल काँधमा बोक्नुभयो
एक हातमा एक ম্যাचलोक
अर्कोतर्फ भाला समात्दै मन्डारिनको कमान्डमा डु to्गामा गए
लगातार पाँच-बेट गरिएको ड्रम बीटहरू सुन्ने गर्थे
डु entering्गामा छिर्दा आँखाभरि आँसुहरू।
[नang्ग लैư्ग यसमा àai vàng
Độu đội nón dấu vai mang súng dài
M tt tay thắ cắp hỏa mai
M tt tay cắp giáo quan sai xuống thuyền।
Thùng thùng trống nnh ngũ liên।
तल गनर्स स्केच 1908 - 1909 in मा कोरियो हनोई [Hà Nội]। यसले हामीलाई त्यस समयमा सैनिकहरूको छवि कल्पना गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ Nguyen [Nguyễn] राजवंश।
माथि दर्साइएका मांसपेशीहरूका लागि, यहाँ केहि कागजातहरू छन् तिनीहरूलाई बुझ्न हामीलाई मद्दत गर्न।
II. मस्केट को राजवंशहरु को बखत भियतनामी सैन्य बलहरु मा नवीनतम प्रकारको arquebus हो म्याक, Trinh, Nguyen [म्याक, Trịnh, Nguyễn] (17th शताब्दीबाट)। मस्केटको संयोजनले चकमकका टुक्राहरूसहित पेकिंग मुर्गीहरूको चालहरूको नक्कल गर्‍यो। अपरेशन प्रविधि निम्नानुसार छन्: “ट्रिगर तान्नुहोस्; ट्रिगर स्पार्किंगको लागि स्टीलको टुक्रामा छुन्छ", अर्थ:" हतौडा पछाडि तान्नुहोस्; यसलाई राख्न संयुक्तमा हुक राख्नुहोस्। जब हामी ट्रिगर तान्छौं, हतौडा चलाइन्छ र चकमकको टुक्राहरूलाई छुन्छ जसले गनपाउडरलाई तीव्र गर्दछ। "
अनुसार जोन पिन्कर्स्टन1प्रभु Nguyen [Nguyễn] यस प्रकारको संग आफ्नो सेना सुसज्जित गाई डियु thuong [sđng điểu thương] (मस्केट), यस्तो पनि भनिन्छ गायिएको हो माई [होआ माई] (माचलोकहरू).
अर्को कागजातले कि dyn राजवंशमा (चीन), त्यहाँ एक ठूलो मिलानको प्रकार थियो जसमा दुई व्यक्तिहरू अपरेट गर्न आवश्यक पर्दछ: एउटा बन्दुकलाई काँधमा राख्नुपर्दछ र अर्को बेयरिंग पोइन्टको रूपमा।
In भियतनाम [भियतनाम], यस प्रकारको बन्दुक हाल संग्रहालयहरूमा प्रदर्शित हुन्छ। रिपोर्ट गरिएको रूपमा, टाई छोरा [Tây Sơn] सैनिकहरूले माथि उल्लिखित प्रविधिहरू बाट प्राप्त गरे दाang ट्रong्ग [इ Tr्ग ट्रong्ग] (17th-18th शताब्दीमा दक्षिण भियतनाम) र अन्य धेरै प्रकारहरूमा सुधार गरियो। सैनिक बलले हतियार कुशलतापूर्वक प्रयोग गरेको थियो खेतमा तिनीहरूको दैनिक अभ्यासको लागि धन्यवाद, जुन एक खेल जस्तो देखिन्थ्यो। यद्यपि, मा Dang Ngoai [Nng Ngoài] (17th-18th शताब्दीमा उत्तर भियतनाम), यो प्रविधि दुई सय बर्षको लागि शक्ति झगडाको लागि पनि प्रयोग भएको थियो। पानी र आगो जस्तै, प्रभु Trinh [Trịnh] नाम दिइएको थियो Thuy Vuong [Thuỷ Vương] (पानीको प्रभु) उनको बलियो नौ सेनाको कारण; प्रभु Nguyen [Nguyễn] नाम दिइएको थियो Hoa Vuong [Hoả Vương] (आगोको प्रभु) किनभने उसको सेनाहरू बलियो अग्नि शक्ति हतियारहरूले सुसज्जित थिए। यसबाहेक, प्रभु Nguyen [Nguyễn] सेनामा जस्तै केहि अन्य हतियारहरू थिए होआ लामो [हो लामो] (आगो ड्रेगन), हो हो [hoả hổ] (आगो बाघ) र टुक्राको साथ बन्दूकहरू बमको रूपमा कार्य गर्दछ।
मूल रूपमा, मस्केट (चकमक) युरोपबाट आएका थिए, त्यसपछि अमेरिका र एसियामा शुरू गरियो। को टाई छोरा [Tây Sơn] सेना उनीहरूको सुधारिएको मस्केटका कारण जो एक टेक्निकल अपरेशनको सर्तमा उच्च थिए भन्ने कुरालाई शक्तिशाली सेना मानिन्छ।केवल चार आन्दोलनहरूमा आवश्यक छ) जबकि बेलायती र युरोपियन सेनालाई २० आन्दोलनहरू आवश्यक पर्‍यो। विशेष गरी, क्विंगको बन्दुक (चित्र) ले बिस्तारै तर धेरै धुवाँको साथ आगलागी भयो। सम्राट क्वाang ट्रung्ग [क्वाang ट्रung्ग] यो बन्दुक लडाईमा प्रयोग गर्नुभयो ताकि उसको पोशाक धुवाँको कारण कालो भयो।
पुरानो समयमा सैनिक र गनर्स (स्रोत: "Kỹ thuật của người An Nam" मा Nguyễn Mạnh H --ng - हनोईमा H. Oger (1908-1909) को टेक्नीक डु peuple अन्नामाइट)
रोप्ने वा चकमकका टुक्राहरू मैचलोकहरूका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। पछि, माचलोकहरू अधिक उन्नत राइफलले प्रतिस्थापन गर्‍यो, त्यस समयमा युरोपियन बन्दुक जस्ता डेटोनेटरहरू र कारतूसहरू प्रयोग गरेर। जबकि, समयमा मिन्ह मंगको [मिन्ह मंग] शासनकाल, म्याचलाक्सहरू राइफलको साथ प्रतिस्थापित गरियो (सैन्य बल कम भएको कारण) तर पछिल्लो शताब्दीको तुलनामा अधिक सामान्य संख्याको साथ, दश व्यक्तिको एउटा बन्दुक हो।
मा नियमहरु अनुसार Nguyen [Nguyễn] राजवंश, सेनाहरूलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको थियो: लडाईका सैनिकहरू र रक्षाका सिपाहीहरू। रक्षा सिपाहीहरू छानिएका थिए Nghe An [Nghệ एक] लाई बिन थुन [Bình Thuận], जो स्थित थिए ह्यु [हु]। उत्तरमा फ्रान्स र भियतनाम बीचको युद्धमा, ह्यु [हु] अदालतले उत्तरको रक्षा गर्न 8,000 सिपाहीहरू पठायो भियतनाम [भियतनाम], एक उच्च-श्रेणीको मार्शल आर्ट मन्डारिनको अधिकार अन्तर्गत। लडाईका सैनिकहरू उत्तरमा खटाइएका थिए। त्यस पछि, फ्रान्सेली सुरक्षा को बखत, यी सिपाहीहरु लिन खो xanh द्वारा प्रतिस्थापित गरियो (निलो बेल्ट सैनिकहरु) (चित्रा)। केही बाँकी सैनिकहरू प्रान्तीय गभर्नरको नियन्त्रणमा थिए।
एक्सएनयूएमएक्स: जोन पिकरस्टन "आधुनिक भूगोल: साम्राज्य, राज्य, राज्य, र महासागरहरू, समुद्रहरू र टापुहरूका साथ कालोनियोंको वर्णन"।
◊ चित्रित छवि - स्रोत: faxuca.blogspot.com, nam64.m Multiply.com
(देखिएको 229 पटक, 1 आज भ्रमणमा)
पोस्ट दृश्यहरू: 122
← पारंपरिक साहित्य र VIETNAM को भाग आर्ट - भाग 3
फूडल डायनेस्टीहरू मार्फत मार्शल आर्ट्स स्कूलहरूको प्रकारहरू →
आजको भ्रमण: 210
अन्तिम7दिन भ्रमणहरू: 7,280
कुल भ्रमण: 81,812